Tsiambaratelon'ny fanambadiana - Ireo miniseries HBO izay hampifandray anao | Bezzia
Tsiambaratelon'ny fanambadiana: Ny andiany HBO tokony ho hitanao
Susana godoy | 14/09/2021 14:00 | ankehitriny
Misy andian-tantara maro miseho amin'ny sehatra. Ny premieres dia tsy mijanona ny zava-mitranga ary ankehitriny, miaraka amin'ny fiverenana amin'ny fomba mahazatra aorian'ny vanim-potoana fahavaratra. Noho io antony io dia anio ny HBO no mibodo ny toerantsika ary tsy mandeha irery fa miaraka amina mpivady izay be ny zavatra holazaina amintsika. Ny tsiambaratelon'ny fanambadiana no andiany vaovao hamafa izany.
Eny, mila manazava ilay zava-baovao ianao satria tena eo amin'ny lampihazo io fa ny hevitra voalohany dia avy amin'ny taona 70, noho izany miatrika famerenana amin'ny laoniny isika. Jereo izay rehetra ilainao ho fantatra momba ny iray amin'ireo andian-tantara andrasana indrindra amin'ny tetikadiny, ny fampianarany fa koa ho an'ireo mpiaro azy.
1 Tsiambaratelon'ny fanambadiana, famerenana ireo andiany nanomboka tamin'ny taona 70
2 Ny momba ilay andiany kely HBO
3 Ny firaisana tsikombakomban'i Jessica Chastain sy Oscar Isaac
4 Fizarana firy no misy ny tsiambaratelon'ny fanambadiana
Tsiambaratelon'ny fanambadiana, famerenana ireo andiany nanomboka tamin'ny taona 70
Toa ny fanavaozana dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra. Satria raha mahomby ny hevitra iray, maninona raha tohizana ny filokana aminy any aoriana. Eny, izany no mitranga amin'ireo andian-tantara kely atolotry ny HBO. Ingmar Bergman no nanoratra ny andiany voalohany. Izay heverina ho iray amin'ireo talen'ny tsara indrindra amin'ny tantaran'ny sinema. Amin'ity tranga ity, hoy Ny tantara tany am-boalohany dia notifirina tamin'ny 1973 ary kintana Liv Ullmann sy Erland Josephson izay nahavita nisambotra vahoaka ary noho izany dia nahita fahombiazana lehibe sy loka maro. Miverina io drafitra io ihany, miaraka amin'ny rivotra nohavaozina nefa vonona ny hahomby toy ny teo aloha.
Ny momba ilay andiany kely HBO
Araka ny hitanao amin'ny voalaza. Ny andiany kely dia momba ny mpivady iray izay ahitana an'i Jessica Chastain izay mpanatanteraka tena mahomby sy matoky tena. Raha etsy an-danin'izany dia eo ny mpiara-miasa aminy, Oscar Isaac izay profesora filozofia ary maniry hatrany fa hitohy ny fanambadian'izy ireo. Fa marina fa na dia mahita ady hevitra tsotra aza isika dia tsy ho tsotra izany. Satria iray amin'ireo asa ireo Mampiseho antsika, amin'ny alàlan'ny mason'ireo mpihetsiketsika azy, ny fitiavana sy ny tsy fivadihana ary ny fisaraham-panambadiana, ankoatry ny lohahevitra maro hafa izay hanohina ny fonao.
Ny firaisana tsikombakomban'i Jessica Chastain sy Oscar Isaac
Androany dia be ny resaka momba ny firaisana tsikombakomba amin'ny roa tonta. Koa satria naseho tamin'ny karipetra mena any Venise ary lasa viriosy izy ireo. Satria raha mbola nijery ireo jiro niavaka i Jessica dia nibanjina azy i Oscar. Fijery iray izay nitety an'izao tontolo izao ary nandoka ny tambajotra tamin'ny fanehoan-kevitra tsara indrindra. Nofaranana tamin'ny famihinana, oroka tamin'ny sandry ary firaisana tsikombakomba namboarina tamin'ny avo indrindra izany. Fa fandrao hivoaka tsy ho eo an-tànana izany, haingana ny fanehoan-kevitr'izy ireo fa nifankahalala nandritra ny androm-piainany ireo mpilalao, rehefa niara-nianatra tany amin'ny oniversite. Tsy asa voalohany niarahan'izy ireo ihany koa io, ka vao mainka izy mankafy ny firaisana tsikombakomba mety misy.
Fizarana firy no misy ny tsiambaratelon'ny fanambadiana
Raha hiverenana amin'ilay andiany mihitsy, dia tsy maintsy lazaina fa afaka mandray marathon sy ny rapid ianao. NAHOANAe fizarana 5 ihany ity andiany ity. Ka toa hisy vanim-potoana tokana io. Indraindray toa fohy loatra izy ireo saingy tsara kokoa ity fintinina ity toy izay tsy manitatra tantara izay mety hahasasatra antsika ihany. Izy io koa dia miresaka momba ny olan'ny mpivady amin'ny fomba fijery hafa, fihodinana izay mahagaga foana. Toa manana ny fisalasalana rehetra izy raha ny vadiny kosa te-hihazona ny firaisan'ny fianakaviana tsy tapaka. Mazava ho azy, raha te hahalala dia mila jerena ianao satria efa misy ao amin'ny HBO io
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » ankehitriny » Tsiambaratelon'ny fanambadiana: Ny andiany HBO tokony ho hitanao
Ny lakilen'ny fisafidianana duvet